Ọ bụrụ na Chineke bụ ihe ọma, N'ihi Gịnị Ka E Ahụhụ? – 2azụ
Home / Nzọpụta / Ọ bụrụ na Chineke bụ ihe ọma, N'ihi Gịnị Ka E Ahụhụ?
The Fall nke madu
Chineke ekeghị mmadụ na-ata ahụhụ.
O mere Adam na Iv, anyị nne na nna mbụ, na-impervious ka mgbu na ọnwụ.
Na-ata ahụhụ a kpọrọ n'ime ụwa mgbe ha tụgharịrị ha Chineke azụ. N'echiche, nhụjuanya bụ ihe e kere eke bụghị nke Chineke ma nke mmadụ, ma ọ bụ, opekempe, a N'ihi ya nke Man omume.
N'ihi na nke jikọrọ ya na Chineke mere site Adam na Iv nupụụrụ, agbụrụ mmadụ nile aghaghị ịtachi obi na-ata ahụhụ (ịhụ Jenesis 3:16 na Pọl Degaara ndị Rom 5:19).
Mgbe anyị pụrụ ịnabata eziokwu a dị ka otu isiokwu nke okwukwe, n'ezie ọ dịghị eme ka ọ bụla mfe obibi na-ata ahụhụ ná ndụ anyị. Kpa ye ata ahụhụ, anyị nwere ike ịhụ onwe anyị nwaa na-ajụ ịdị mma Chineke na ọbụna Ya ịdị adị. Ma eziokwu nke okwu ahụ bụ Chineke adịghị akpata nhụjuanya, ezie na mgbe ụfọdụ ọ na-eme ekwe ka ka ya na ime.
Chineke bụ ihe ọma site n'okike ma, Ya mere, keenweghi ike nke na-eme ka ihe ọjọọ. Ọ bụrụ na ọ na-ekwe ka ihe ọjọọ-erukwa, Ọ na-eme otú mgbe niile na iji me ka a ukwuu ọma (Lee Pọl Degaara ndị Rom 8:28).
Nke a bụ ikpe na Fall nke madu: Chineke kwere ka anyị hapụ ndị n'ụwa ọṅụ nke Eden naanị ime ka dịnụ anyị, site n'àjà nke Ọkpara Ya, ndị ka elu ịma mma nke Heaven.
-Ekpe ekpere n'ogige Getsemeni n'abalị ahụ e jidere Ya, Jizọs nyere anyị ihe nlereanya zuru okè nke otú anyị na-emeghachi omume mgbe ahụhụ na-abịa anyị. Mbụ ọ jụrụ Nna na-mgbu si Ya. O kwukwara,, "Ọ bụghị uche m, ma gi, -mere " (Luke 22:42).
Kpe ekpere a na-achọ oké ntụkwasị obi na ịdị mma Chineke: na Ọ chọrọ anyị obi ụtọ ọbụna karịa anyị na-eme, na O n'ezie maara ihe kasị mma maka anyị. N'ihi na anyị na-ekpebi, Kama nke ahụ, na Chineke na-enweghị ịhụnanya maka ikwe nhụjuanya bụ na-ekpe ikpe Ya si anyị ejedebeghị mmadụ ọgụgụ isi. "Olee ebe ị nọ mgbe m tọrọ ntọala ụwa?"O nwere ike ịjụ anyị. "Gwa m, Ọ bụrụ na ị nwere nghọta " (Job 38:4). Anyị apụghị nnọọ hụ ihe niile Chineke na-ahụ. Anyị apụghị ịghọta niile zoro ezo ụzọ ndị Ọ na-eji oghom ọnọdụ iduzi obi nke ụmụ Ya kwupụta nchegharị na nweta anyị ime mmụọ izu okè. Mgbe anyị na-agbasaghị emehie na hụrụ nke a ndụ dị ka anyị ọma kasịnụ, Chineke na-ahụ nabatara umu foto, ebighi-ebi foto. Ọ n'ụzọ ziri ezi na-aghọta anyị kacha mma na-nzube nke O kere anyị: ibi ndụ na-enwe obi ụtọ na Ya ruo mgbe ebighị ebi n'Eluigwe.
Na-abịa n'ime Chineke ọnụnọ Heaven-achọ na anyị-gbanwee: na anyị dara ọdịdị mmadụ ike mere nsọ; n'ihi na Akwụkwọ Nsọ kwuru, "Ọ dịghị ihe na-adịghị ọcha ga-iba [Heaven]" (ịhụ n'Akwụkwọ Mkpughe 21:27). (N'ihi na ihe na isiokwu a, biko hụ anyị na peeji on Pọgatrị, Mgbaghara & Pụta.
Nke a nsọ usoro-agụnye ahụhụ. "Ọ bụrụ na otu mkpụrụ ọka wit adaghị ụwa na-anwụ anwụ,"Na-ekwu Jesus, "Ọ na-anọgide naanị; ma ọ bụrụ na ọ na-anwụ anwụ, ọ na-agba mkpụrụ dị ukwuu. Onye hụrụ ndụ ya na-atụfu ya, na onye kpọrọ asị asị ndụ ya n'ụwa a ga--ya maka ndụ ebighi ebi " (John 12:24-25).
Ọ bụ na-egbu mgbu na-siva anyị enweghị isi Mgbakwụnye ka ihe nke ụwa a, ma ụgwọ ọrụ na-echere anyị na ụwa na-abịa bụ uru ndị na-eri. The nwa e bu n'afọ na-ga-ahọrọ na-anọgide na ọchịchịrị familiarity nke n'afọ nne-ya. O biri n'ebe ruo ọnwa itoolu; ọ bụ nanị eziokwu ọ maara. Iji-anapụ a ala ebe na ada n'ime ìhè nke ụwa bụ na-egbu mgbu. Ma nke anyị na-akwa ụta, ma ọ bụ ọbụna na-echeta, ihe mgbu nke mụrụ ya, ya ntinye n'ime ụwa nke a?
N'ihi ya, ọtụtụ na-erughị ga anyị n'ụwa mgbu okwu ka anyị ozugbo anyị banyere n'ime eziokwu nke Heaven. N'agbanyeghị ihe ahụhụ anyị nwere ike ịna-edi ugbu a, ma ọ bụ nwere ike ịtachi obi na-eme n'ọdịnihu, anyị na-akasi obi ịmara na ihe mgbu nke ndụ a bụ nanị nwa oge-na ha, kwa, ga ụbọchị gafee-nakwa na ọṅụ nke Eluigwe bụ zuru ezu na ebighị.
N'Akwụkwọ Mkpughe (21:4) na-ekwu, "[Chineke] ga-ehichapụkwa anya ọ bụla n'anya ha, na ọnwụ ga-adị ọzọ, dịghịkwa nke ga-iru uju ma ọ na-eti nọ na mgbu, ihe mbu nile agabigawo. "Ma nke a bụ otú Chineke bụ ike idi ahụ anyị, Ya ụmụ a hụrụ n'anya, na-ata ahụhụ ebe a maka a oge n'ụwa. Site echiche ya, anyị n'ụwa ahụhụ rue na ntabi anya, mgbe ndụ anyị na Ya n'Eluigwe, anyị obi ụtọ, ga-enweghị ọgwụgwụ.
Okwukwe Ndị Kraịst bụ debere iche niile okpukpe ndị ọzọ dị na ọ bụ naanị na-akụzi na Chineke ghọrọ nwoke–n'ime anyị–na-ata ahụhụ ma nwụọ n'ihi anyị mmehie. "[H]e unan mmebi iwu anyị,"Na-ekwu Aịsaịa onye amụma (53:5), "Ọ na-echifịa anyị iniquities; n'elu ya bụ kara aka, nke mere ka anyị dum, na n'ọnyá ya anyị na-agwọ. "
Cheta, na Jizọs, ịbụ ndị Chineke, bụ (na bụ) emeghị mmehie, ma ihe ndị o na-ata ahụhụ bụ n'oké na nnọchite anyị, na anyị, agbụrụ mmadụ, e gbapụtara site na Rihanna nke Jizọs Kraịst.
Ọ bụ eziokwu na Ya na-ata ahụhụ na nnọchite anyị adịghị wepụrụ ihe mgbu si ndụ anyị. Kama nke ahụ, dị ka Pọl onyeozi dere na ya Akwụkwọ ozi ka Phillipians (1:29), "Ọ e nyere unu na n'ihi Kraịst ị na-ekwesịghị naanị kwere na ya kamakwa na-ata ahụhụ n'ihi ya."
Ya mere, site na anyị ọnwụnwa ndị anyị na-ada abịarukwu Kraịst na-abịa ọbụna iso na-ebube-Ya (ịhụ Pọl Nke abụọ Letter ndị Kọrint, 1:5). Mere anya otú Jizọs mata na onye na-arịa na-arịa na-aghọ a ndụ oyiyi nke Ya. Nne Teresa kwuru mgbe nke-ịhụ ihu nke ndị wretched mkpụrụ obi, onye ọ Ewepụtara si gutters nke Calcutta, nnọọ ihu nke Jesus.
Ya mere, Kraịst Rihanna adịghị anapụ onwe anyị na-ata ahụhụ, ma gbanwee ya. Dị ka Pope John Paul Ukwu dere,"Na Cross nke Kraịst bụghị nanị bụ mgbapụta arụzu site na-ata ahụhụ, kamakwa nhụjuanya ụmụ mmadụ onwe ya emewo e gbapụtara " (Redemptive ahụhụ 19).
Ahuhu nke Chineke na-enye ohere na-abịa n'ime ndụ anyị, mgbe e nyere na-adị n'otu ahụhụ nke Kraịst na obe, na-na a redemptive àgwà na ike-awa Chineke maka nzọpụta nke mkpụrụ obi. N'ihi na anyị, mgbe ahụ, nhụjuanya bụ idịghe ndebe ndebe nke nzube; N'ụzọ dị ịrịba ama, ọ bụ ụzọ nke inweta Chineke amara. Na mgbu bụ ihe ngwá site na nke Chineke nwere ike eme anyị nsọ, a ụzọ ime mmụọ kwachaa mmadụ pụrụ ikwu.
The Letter ndị Hibru (5:8) na-agwa anyị Jesus, Onwe ya,
"Mụtara nrubeisi site na ihe ọ tara." Ma leta na-aga n'ihu, “N'ihi na Jehova adọ aka ná ntị ya ọ hụrụ n'anya, na chastises ọ bụla nwa onye ọ na-enweta. Ọ bụ n'ihi na ịdọ aka ná ntị na ị ga-ịtachi obi. Chineke na-emeso unu dị ka ụmụ; maka ihe onye bu nwa ahu nna ya na-adịghị ịdọ aka ná ntị? ... [Nna] adọ aka ná ntị anyị maka ezi, na anyị nwere ike ịkekọrịta n'ịdị nsọ ya,. Maka oge niile ịdọ aka ná ntị yiri na-egbu mgbu kama obi ụtọ; mgbe e mesịrị ọ na-amịrị ndị udo mkpụrụ nke ezi omume ndị e ji ya zụọ ya.” (12:6-7, 10-11)
Ịghọta echiche nke redemptive ahụhụ, Saint Paul kwuputa na ozi o degaara ndị Kọlọsi 1:24, "Na anụ ahụ m m mezue ihe na-adịghị ná Kraịst mkpagbu n'ihi nke ahụ ya, nke ahụ bụ Church. "
Nke a apụtaghị, n'ezie, na Kraịst Rihanna bụ n'ụzọ ọ bụla ezughi oke. Àjà ya na nnọchite anyị bụ n'onwe ya n'ụzọ zuru okè zuru ezu na efficacious. Ma, na echiche nke ya ahuhu, Jizọs kpọrọ anyị ka anyị bulie anyị cross na-eso Ya; ịrịọchitere maka ibe, n'iṅomi nke Ya, site n'ekpere na-ata ahụhụ (ịhụ Luke 9:23 na Pọl Akpa Letter Timoti 2:1-3).
N'otu aka ahụ, N'akwụkwọ ozi mbụ ya (3:16), Saint Jọn na-ede, "Site na nke a anyị mara ịhụnanya, na ọ tọgbọrọ ndụ ya n'ihi anyị; na anyị kwesịrị osụhọde ndụ anyị n'ihi na umu-nne. "
"Ọ na-ekwere na m ga-eme na ọrụ m na-eme,"Ka Jehova kwuru; "Na ukwuu ọrụ ndị ka ndị a ọ ga-eme, n'ihi na m na-aga Nna " (John 14:12). Ya mere, Jesus chọrọ anyị na-ekere òkè na-arụ ọrụ nke mgbapụta bụghị n'ihi mkpa ma ịhụnanya, yiri otú n'ụwa nna anya na-agụnye nwa-ya eme. Anyị intercession maka ibe, Ọzọkwa, adọta n'elu Kraịst pụrụ iche na naanị mediation na Chineke (ịhụ mbụ Pọl degaara Timoti, ọzọ, 2:5).
Iji jide n'aka na, niile anyị na-eme na-adabere ihe O meworo na ga-ekwe omume iche site na ya. Dị ka Jizọs kwuru na Jọn 15:5, "Abụ m osisi vaịn, unu bụ alaka. Ọ bụ onye na nānọgide kwa n'ihu-m, na m na ya, ọ na ọ na-na-amị ọtụtụ mkpụrụ, n'ihi na e wezụga m i nwere ike ime ihe ọ bụla. "N'ihi ya,, Ọ bụ anyị onwe anyị njikere na-ata ahụhụ n'ihi na ya na na Ya na-"enweghị,"Na-eji ihe Pọl okwu, na ahụhụ nke Kraịst.
Òkù isonye na Kraịst redemptive ọrụ site n'otu anyị ahụhụ Ya maka nzọpụta anyị na nzọpụta nke ndị ọzọ bụ n'ezie a magburu onwe nkasi obi. Saint Thérèse nke Lisieux dere:
“N'ụwa, na edemede ke usenubọk m na-eche na ihe ga-eleghị erukwa ma ụtọ ma ọ bụ vexatious n'ụbọchị; na ọ bụrụ na m hụrụ naanị agbalị ihe m bilie dispirited. Ugbu a, ọ bụ nnọọ ndị ọzọ ụzọ: M na-eche ihe isi ike ndị na-ata ahụhụ na-echere m, na m ebili ọzọ na-enye ọṅụ ma na nke jupụtara obi ike ihe m ịhụ ohere nke igosi ịhụnanya m maka Jesus ... . Mgbe ahụ, m susuo m crucifix na dina ya obi na ohiri isi mgbe m na-eji ejiji, m na-asị ya: 'My Jesus, i na-arụ ọrụ zuru ezu na ákwá ezu n'oge atọ-na-iri atọ na afọ nke ndu-gi na nke a ogbenye n'ụwa. Were ugbu a gi fọdụrụ. ... My n'aka na ọ bụ na-ata ahụhụ na-alụ ọgụ '” (Na-adụ ọdụ na Reminisces).
Mgbe na-ata ahụhụ na-adị n'otu Onyenwe anyị Jizọs bụ kenchekwube–ezie ka na-egbu mgbu–na-ata ahụhụ iche si Ya dị ilu na efu.
N'ọnọdụ ndị ahụ, e nweghị uru ahụhụ, na ụwa na-agba na ya–na-achọ izere ya n'oge niile ụgwọ–ma ọ bụ blames onye maka ọjọọ dakwasịrị ya. Ọmụmaatụ, ụfọdụ ịhụ ihe mgbu ma na-achọ ka ntaramahụhụ emeso site Chineke n'elu-enweghị okwukwe, ma ọ bụ ahụhụ na ọnwụ ha na site, na-ekwu, ọrịa cancer akpa ume dị ka ada na site a onye enweghị okwukwe. N'ezie, e nwere ndị kwere na Chineke na-ezube maka ọ bụla kwere ekwe na-ebi ndụ kpamkpam free si na-arịa ọrịa; ọ bụ onye na-ekpebi ma ọ bụ na na-ogbenye bụ mmehie mgbe Chineke na-ekwe nkwa ọganihu.
The Bible, n'ezie, kpamkpam refutes a lee ya anya ọ bụla ọnụ ọgụgụ nke ugboro, gụnyere Ozizi Elu nke Ugwu na Matiu 5, “Gọziri agọzi ndị na agụụ na-agụ akpịrị ịkpọ nkụ maka ikpe ziri ezi, n'ihi na ha ga-enwe afọ ojuju,” na Luke 6:20, e.g., "Gọziri agọzi ka ị ogbenye ...,"Na" Ahụhụ ga-adịrị unu ndị na-ọgaranya " (Luke 6:24; CF. Matiu 6:19-21; na Letter nke James 2:5).
Job, onye Bible kọwara dị ka "a enweghị ụta na nwoke ezi omume" (Job 2:3), tara ahụhụ ọrịa, ọnwụ nke ndị ha hụrụ n'anya, na ọnwụ nke ihe onwunwe ya.
The Virgin Mary, onye emeghị mmehie (Luke 1:28), tara ahụhụ jụrụ, enweghị ebe obibi, mkpagbu, na ọnwụ nke ya Son- "a mma-agha ekịm gị onwe gị nkpuru-obi,"Simeon kpugheere ya (Luke 2:35).
Jọn Baptist, na precursor Jizọs, "-Eyi uwe e ji ajị kamel" na riri "igurube na mmanụ aṅụ ọhịa" (Matiu 3:4). Timothy tara ahụhụ si na-adịghị ala ala afo ọrịa (ịhụ Pọl Akpa Letter Timoti 5:23); na Pọl aghaghị ịhapụ ya ngalaba-ọrụ, Trọfimọs, n'azụ ruru ka ọrịa (ịhụ Pọl Second Letter Timoti 4:20).
Ọzọkwa, mgbe Saint Peter nwaa Jizọs ka ịhapụ Rihanna, Jizọs zaghachiri, "Gaa m n'azụ, Setan! Ị bụ onye na-egbochi m; n'ihi na ị bụ adịghị n'akụkụ nke Chineke, ma nke madu " (Matiu 16:23).
Na eziokwu, ọ bụla iji nweta ebube mgbe gafere ọtụtụ Cross bụ mmụọ ọjọọ na ọdịdị (CF. Tim Staples, n'ihota Fulton J. Sheen, "Catholic Azịza Ndụ" redio [February 24, 2004]; dị na catholic.com).
Nso na njedebe nke ndụ ya, otu Peter, emi ẹketụtde baara site Jesus maka ịchọ ya aka izere ahụhụ, kwuru, nke kwesịrị ntụkwasị obi:
"Na nke a [nketa eluigwe] ị na-aṅụrị ọṅụ, ezie na ugbu a, n'ihi a obere mgbe ị nwere ike na-ata ahụhụ ọnwụnwa dị iche iche, nke mere na nke ezigbo okwukwe gị, oké ọnụ ahịa karịa ọlaedo nke ezie na ala n'iyi a na-anwale site ọkụ, nwere ike redound ka otuto na ebube na nsọpụrụ n'ime mkpughe nke Jisọs Kraịst. " (Pita Akpa Letter 1:6-7)
Ya mere, Ọ bụ kwesịrị ya?
Iji zaa ajụjụ ahụ, anyị pụrụ ịgakwuru Saint Paul ya Letter ndị Rom 8:18: "M na-atụle ya na ahụhụ nke ugbu a, re bụghị uru atụnyere na otuto nke a ga-ekpughe anyị."
N'akụkụ ahụ, anyị ga-mgbe ida n'anya na-agbata n'ọsọ: na otu ụbọchị, site na amara nke Chineke, ọ bụla n'ime anyị ebe a ga-ahụ Onyenwe anyị Jizọs Kraịst na Alaeze Ya; le Ya luminous ihu; anụ Ya mmụọ ozi olu; na susuo ya dị nsọ aka na ụkwụ, merụrụ anyị n'ihi. Ruo na ụbọchị, anyị ike na-akpọsa dị ka Saint Francis nke Assisi na The Way nke Cross, "Anyị na-akpọ isiala nye Ị, O Christ, na anyị na-agọzi Ị, n'ihi na site na nsọ gị Cross Ị gbapụtara ụwa. Amen. "